प्रोफेसरको ओछ्यान तताउने विद्यार्थीलाई डिग्रीको सर्टिफिकेट, तजविज मिलाउने महिला प्रोफेसर ! – Sudarshan Khabar
प्रोफेसरको ओछ्यान तताउने विद्यार्थीलाई डिग्रीको सर्टिफिकेट, तजविज मिलाउने महिला प्रोफेसर !
विद्यार्थीहरुले सफलताका लागि शिक्षकहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेका धेरै घटना हामीले देखेका वा सुनेका छौं । तर स’म्बन्ध ब’नाउन दिए त्यसको सट्टामा डिग्रीको सर्टिफिकेट अझ त्यसको तजविज मिलाउँने भने महिला प्रोफेसर ।
यो खुलासाले अहिले तरंग पैदा भएको छ । घटना भारतको तमिलनाडुको हो । त्यहाँ जे भयो त्यसले सबैको होस उडाएको छ । त्यहाँबाट एक सनसनीखेजमा संलग्न महिला कलेजकी प्राध्यापकलाई मद्रास उच्च अदालतले पक्राउ गरेको ११ महिना पछि सशर्त जमानत दिएको छ । उनी जमानतमा थुनामुक्त भएपछि यो घटना बाहिर आएको छ । न्यायाधीश एन किरुबाकरण र मदुरै पीठका एसएस सुन्दरले निलम्बित सहायक प्राध्यापक निर्मला देवीलाई जमानत दिएका हुन् ।
उनीमाथि आरोप थियो कि उनी मदुरै कामराज विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग शा’रीरि’क स’म्बन्ध रा’ख्न महि’ला विद्यार्थीहरूलाई राम्रो संख्या र पैसाको मोह देखाउने गर्थिन् । सरकारी वकिलले अदालतमा उनलाई जमानत दिनेमा कुनै आपत्ति नभएको बताएका छन् ।
अदालतले प्राध्यापकलाई अनुसन्धानमा प्रहरीलाई पूर्ण सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ र मिडियामा कुनै पनि प्रकारको अन्तर्वार्ता नदिन आदेश गरेको छ, जसले अनुसन्धानलाई असर पार्नेछ।
यसभन्दा पहिले तल्लो अदालत र उच्च अदालतले जमानत याचिका खारेज गरेको थियो । निजी कलेज देवानगा कला कलेजकी प्राध्यापक देवीलाई १६ अप्रिल, सन् २०१८ मा पक्राउ गरिएको थियो ।
विद्यार्थीसँग प्राध्यापकको कुराकानीको अडियो भाइरल भएपछि कलेज र महिला फोरमको गुनासोको आधारमा उनीविरुद्ध कारबाही गरिएको हो । अडियो क्लिपमा, प्रोफेसरले कथित रूपमा विद्यार्थीहरूलाई केही अधिकारीहरूसँग शा’रीरि’क स’म्ब’न्ध कायम गर्न सल्लाह दिएका थिए ।
पक्राउ गर्नु भन्दा पहिले कलेजले आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि प्राध्यापकलाई निलम्बन गरेको थियो । अडियो फेला परिसकेपछि जब विवाद बढ्यो तब यसलाई विवाद राज्यको सीआईडीलाई हस्तान्तरण गरियो ।
देवीसँग सोधपुछको आधारमा प्रहरीले सहायक प्रोफेसर भी मुरुगन र अनुसन्धान विद्यार्थी करुप्पासमीलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । तीनै जनालाई उच्च अदालतले निवेदन अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले जमानत दिएको हो ।
सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा, सीबी–सीआईडीले २०० पृष्ठको आरोपपत्र अदालतमा दायर गरेको थियो । यसभन्दा पहिले, १६०० पृष्ठको प्री–चार्जशीट जुलाईमा दर्ता गरिएको थियो ।